Izingxenye ze-VSI Wear (Rotor Parts)
I-Barmac VSI Orange RC yochungechunge lwe-Rotor
I-RC840 ROTOR, Ama-rotor ochungechunge olusha we-Orange angathuthukisa kakhulu isikhathi sokukhiqiza ngokwelula ingxenye yokuphila nokugcinwa ngokushesha.
I-GUBT ihlinzeka ngama-manganese-steel cone liners, afanele ama-crusher crushers kanye nama-gyrator crushers.
I-GUBT ingcweti ye-aftermarket yama-crone crusher, futhi ukumbozwa kwayo kwezingxenye zesigaxa se-cone esitokisini akunakuqhathaniswa.
I-GUBT ihlinzeka ngemihlathi yomhlanga eyenziwe ngensimbi ye-manganese, efanelekile kuma-crusher ahlukahlukene omhlathi emhlabeni jikelele. Nikeza izingxenye kanye nokusekelwa kwezobuchwepheshe embonini yezimayini, ezihlanganisiwe kanye nokuvuselelwa kabusha!
I-GUBT ingcweti enhle kakhulu ye-aftermarket yama-crusher emhlathini, futhi ukumbozwa kwayo kwezingxenye zomhlathi crusher esitokisini akunakuqhathaniswa.
UGUBT ungumholi womhlaba wonke emkhakheni we-aftermarket we-VSI. Sinabanjiniyela abangochwepheshe emkhakheni we-VSI futhi sitshale isikhathi esiningi namandla ukuthuthukisa ubuchwepheshe ku-VSI ukuze ukutholakala komkhiqizo we-GUBT's VSI PARTS kuqhubeke nokukhula ngokushesha. Uma kuqhathaniswa nemikhiqizo ejwayelekile ye-VSI emakethe, imikhiqizo ye-VSI ye-GUBT inezinzuzo ezithile ezihlukile, kufaka phakathi indawo ebushelelezi, usayizi onembile, ukumelana kokugqoka okuphezulu, nempilo ende yokugqoka.
Ukuncika ekuhlangenwe nakho okuphumelele kakhulu kokukhiqiza, ubuchwepheshe, nokuqina kwekhwalithi emkhakheni we-VSI, i-GUBT ihlose ukusiza amakhasimende ukunciphisa izindleko, ukukhulisa ukutholakala kwezingxenye, ukunciphisa isikhathi sokuphumula, nokunikeza insizakalo engcono yokuthengisa ngemuva.
I-GUBT ihlinzeka nge-Liner YAKHE eyenziwe ngensimbi ye-manganese, i-chromium ephezulu, ne-Hardox steel, efanelekayo kuma-crusher ahlukahlukene omthelela emhlabeni jikelele. I-GUBT inikeza izingxenye nokusekelwa kwezobuchwepheshe embonini yezimayini, ukuhlanganiswa kanye nokuvuselelwa kabusha kwebhizinisi ngemuva!
Ukuncika ekuhlangenwe nakho okuphumelele kakhulu kokukhiqiza, ubuchwepheshe, nokuqina kwekhwalithi emkhakheni we-HSI, i-GUBT ihlose ukusiza amakhasimende anciphise izindleko, akhulise ukutholakala kwezingxenye, anciphise isikhathi sokuphumula, futhi ahlinzeke ngezinsizakalo ezingcono emva kokuthengisa.
UGUBT ungumholi womhlaba wonke embonini yokusakaza. Sineqembu lochwepheshe bokusakaza onjiniyela futhi sitshale isikhathi esiningi namandla ukukhulisa imishini yethu yokusakaza.
Ukuncika ekuhlangenwe nakho kweminyaka ekufakweni kwemishini nokuhlangenwe nakho okuphumelelayo kokukhiqiza, ubuchwepheshe, nokuqina kwekhwalithi embonini, i-GUBT ihlose ukusiza amakhasimende ukunciphisa izindleko, ukukhulisa ukutholakala kwezingxenye, ukunciphisa isikhathi sokuphumula, nokunikeza insizakalo engcono yokuthengisa ngemuva.